Vidin'ny motera induction Single Phase & amidy amin'ny varahina na alimina
Motera fampidirana dingana tokana amin'ny vidiny lafo indrindra
Vidin'ny motera tokana, mpamongady & mpamatsy
Motera ankapobeny fampidirana AC
Motera fampidirana dual-capacitor dingana indroa tsara indrindra
Motors induction dingana tokana
Safidy maotera isan-karazany isan-karazany amin'ny motera
Misy karazana motera tsy mandeha afa-tsy vitsivitsy. Ny Motor Induction Single phase dia misy fihoarana dingana tokana izay apetaka amin'ny stator ny motera ary tranom-baravarankely napetraka eo amin'ny rotor. Ny môtô Split Phase dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Resistance Start Motor. Crompton Greaves 1 HP 0.75 kW 2 Pole Flange nitaingina Capacitor Start Induction Run AC Toro môtô
Manome vokatra avo lenta sy ambany izahay. Ny motera misy alokaloka dia karazana motera fampidirana dingana tokana AC. Ny ampahany amin'ny refulsion dia manomboka motera fampidirana Latorated stator core.
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandraisa aminay, faly izahay manampy anao! Misy serivisy ho an'ny mpanjifa 24 ora an-tserasera. Rehefa manome vokatra tsara izahay dia hanao ny asa fanompoana.
Manana ekipa matanjaka izahay, ekipa mpikaroka miaraka amin'ny fikarohana tsara, ary ekipa aorian'ny varotra. Ny motera fanombohana fampidirana capacitor dia mamokatra sahan'andriamby mihodina kokoa noho ny motera fizarazarana.
Misy karazany telo ny motera fampidirana tokana
Môtô fampidirana horsepower
Ny Motor Induction Single phase dia misy fihoarana dingana tokana izay apetaka amin'ny stator ny motera ary tranom-baravarankely napetraka eo amin'ny rotor. 5kw moto tokana seiko kalitaon'ny Seiko, ny vokatra amidy dia coil varahina daholo, fiakaran'ny maripana ambany, androm-piainana lava; 2hp 240v herinaratra tokana mandeha amin'ny motera fanamoriana avo lenta, jitter kely, fandidiana azo antoka; fitehirizam-bokatra avo lenta, mitafy mahatohitra, motera fampidirana ac, vidin'ny motera indostrialy 1 hp, ho an'ny vidin'ny motera tokana 1hp, Makà ny fifampiraharahana tsara indrindra ho an'ny Indostrialy Single Phase Induction / Asynchronous General purpose Industrial Industrial Motors avy any Sina famours Sogears Group. Fiara hafainganam-pandeha miovaova, Compact, Global Motor AC Gear Motors.
Vaovao 2 HP Electric Motor 56C Single dingana TEFC 115/230 Volt 3450 RPM. motera fampidirana dingana tokana miaraka amin'ny alim-by mifanohitra amin'ny stator varahina, mividiana vidiny ambany, maotera dingana tokana avo lenta miaraka amin'ny fandefasana eran'izao tontolo izao AVY AMIN'NY GROUP NER. Mpanondrana Motor Induction AC Single - 90W-120W Motors Induction AC telo / tokana AC, Motera Dingana tokana misy boaty miendrika zorony havanana, motera miisa 60W AC Dela Helical Inline.
Motera mandeha AC mandeha irery
Misy karazany telo ny motera fampidirana tokana. Ny môtô Split Phase dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Resistance Start Motor. Ny Capacitor Start Motors dia dingana iray Induction Motor izay mampiasa capacitor ao amin'ny boriboritany mihodina mba hiteraka fahasamihafana lehibe kokoa eo amin'ny ankehitriny sy ny fiolahana fanampiny.
Moto mihetsika 0.5 hp, motera mandeha tokana misy boaty fihenam-bidy, motera ac ac miaraka amin'ny fanaraha-maso haingana, motera ac gear 100 rpm, vidin'ny motera 1/2 hp, motera fampidirana dingana tokana miaraka amin'ny boaty, 1/2 hp dc gear motor, dingana tokana motera misy boaty. Ny motera fampidirana AC dia tsara indrindra ho an'ny asa mandeha irery sy mitohy toa ny rafitra mpampita. 1/2 HP High Power Single-Phase AC Gear Motors misy amin'ny tselika maro isan-karazany eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 627 in-lbs amin'ny zoro sy ny endriny mifanitsy amin'ny zoro dia manana fahombiazana avo lenta kokoa avy amin'ny fitaovana hypoid na helical raha toa ka manome output torsiala lehibe kokoa ho an'ny goavana isan-karazany ny fampiharana.
Motor maotera AC miaraka amin'ny fifehezana haingana
Ny Capacitor Start Motors dia môtô induction dingana tokana. Ny stator an'ny motera fampidirana dingana fisarahana dia omena fiolahana. Ny rafitra fizarana telo na dingana iray misy tariby dia karazana fizarana herinaratra mandeha amin'ny dingana tokana. Ny motera induction Single-phase dia ampiasaina betsaka amin'ny enta-mavesatra kely kokoa.
Ny fifehezana dia mety amin'ny fampiharana gearmotor AC irery izay mitaky hafainganam-pandeha miovaova, mihazakazaka mihazakazaka ary mamadika。 AC Speed ​​Control Motors avy amin'ny 6w ka hatramin'ny 120w, môtô haingam-pandeha mitovy maotera, Speed ​​Controller 110V 120W ho an'ny AC Gear Motor, io laharana io ihany misy amin'ny dingana tokana, azo ovaina haingam-pandeha miaraka amin'ny mpanara-maso PWM (Pulse Width Modulate). Karazana freins elektromagnetika ho an'ny fiasa mitsangana na ny hazo boribory mahazatra.
Raisinay ho kalitao ny kalitao ary ny vidiny ambany indrindra dia ny fahatsoram-po.